Daawo Oo Hana Qoslin! Goolkii Mohamed Ee Layaabka Lahaa Ee Uu Chelsea Ka Dhigayay Iyo Isbarbar Dhiga Mid Uu Isku Dayay Waqtigiisii Blues Uu Joogay. - GOOL24.NET
Daawo Oo Hana Qoslin! Goolkii Mohamed Ee Layaabka Lahaa Ee Uu Chelsea Ka Dhigayay Iyo Isbarbar Dhiga Mid Uu Isku Dayay Waqtigiisii Blues Uu Joogay.
Mohamed Salah ayaa beeniyay isla markaana meesha ka saaray in uu yahay ciyaartoy ah layaab hal xili ciyaareed isaga oo xili ciyaareedkiisii labaad ee Liverpool wacdaro cusub dhigaya. Mohamed Salah waxa uu haddaba ka mid yahay ciyaartoyda ugu gool dhalinta badan Premier league wuxuuna u tartamayaa in uu difaacdo kabta dahabka ah ee Premier league.
Mohamed Salah ayaa gool cajiib ah oo ka mid ah tartamayaasha goolka sanadka ee Premier league waxa uu ka dhaliyay kooxdiisii hore ee Chelsea kulankii xalay ee Anfield kaas oo rajadii soo laabasho ee Blues si buuxda u burburiyay.
Laakiin aduunyadu waa taariikh, waqtigan la joogo ma jiro wax qarsoomayaa waxaana jira dad xusuustoodu fiican tahay isla markaana haya cadaymo hore u dhacay oo waqtiyada la joogo barbar dhiga xog ama muuqaalo hore marka uu yimaado wax la mid ahi.
Waxaa soo baxay muuqaal qosol badan isla markaana uu Mohamed Salah iskugu dayay in uu ku dhaliyo goolkii xalay oo kale laakiin markaas waxa uu ahaa ciyaartoy ka tirsanaa kooxda Chelsea ee uu xalay goolka layaabka leh ka dhaliyay.
Mohamed Salah-xii Chelsea waxa uu qaatay magaca Flop ama fashil halka uu hadda ka mid yahay ciyaartoyda Liverpool iyo Premier league ugu fiican, waana farqiga u dhexeeya isku dayga qosolka leh ee aanu halkan idiinku hayno iyo goolka uu xalay dhaliyay.
Mohamed Salah ayaa bishii October 28,2014 kii waxa uu u ciyaarayay kooxda Chelsea kulankii Strawberry Town wuxuuna isku dayay in uu darbo kala soo galo dhinaca midig isla markaana uu qaabkii xalay oo kale uu kubbada uga darbeeyo meel 20 yards goolka u jirtay.
Laakiin Salah ayaa kubbada soo xeegayn kari waayay wuxuuna halkii uu goola kaga tuurayay arkay kubbada oo tuuska ama gacan tuurasho u baxday. Alla maxay xaaladahuhu isbadaleen!. Xalayna waxa uu darbadiisa ka tuuray 30 yards ama wax la mid ah wuxuuna ku dhaliyay goolka wali haysta saxaafada aduunka.
Marka hore daawo wixii uu Mohamed Salah ka sameeyay kulankii Chelsea iyo Strawberry Town ee sanadkii 2014 kii:
Mohamed Salah cuts inside and tries his luck from 20 yards out… and it’s a throw in for Shrewsbury. Not so shrewd.
Strawberry Town – Chelsea FC
Laakiin Mohamed Salah ma aha kan hore balse halkan ka daawo muuqaalka goolkii uu xalay ka dhaliyay Chelsea ee ka midka ah goolasha xili ciyaareedkan ugu fiican Premier league.
I’ve watched this at least 30 times – Salah you beauty 👏 #LIVCHE pic.twitter.com/OGIYLoUBRb
— Ben Rogers (@BenRogers223) April 14, 2019
Waxay labadan dhacdo si cad u muujinayaan horumarka uu xidiga reer Masar ciyaartiisa ka sameeyay tan iyo markii uu Liverpool soo gaadhay oo uu noqday mid gabi ahaanba khilaafsan xidigii uu Chelsea ku soo ahaa.